ပျိုမေတို့ သင်္ကြန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကဲနိုင်ဖို့ ဆံပင်ပုံစံအလန်းလေးတွေ 😍😍😍💯💯💯 In:Beauty Hacks, Kawi Inspires
သင်္ကြန်နားနီးပြီဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေ ဘာဝတ်ရင်ကောင်းမလဲ?? ဆံပင်ကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ?? ဆိုပြီးပြင်ဆင်နေကြပြီမလား???? အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့ ကဝိတို့က သူများတွေထက်ဆန်းသစ်မယ့် ဆံပင်ပုံစံအလန်းလေးတွေပြောပြပေးမယ်လေနော်!! ဆံပင်ပုံစံလေးတွေကတော့ ခက်ခက်ခဲခဲတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်ကျစ်နေကျ ကျစ်ဆံမြီးကိုမှ နည်းနည်းဆန်းသစ်ထားတာလေးတွေပါ။ အဲဒါဆို ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော် …. ၁) Bling bling ကျစ်ဆံမြီး ဒီငါးရိုးကျစ်ဆံမြီးလေးက ကောင်မလေးတွေတိုင်းကျစ်တတ်ကြတယ်မလား?? ရိုးရှင်းလှတဲ့ ငါးရိုးကျစ်ဆံမြီးလေးအပေါ်မှာ glitter လေးတွေလိမ်းပေးလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ glitter အရည်လေးတွေမရှိလည်း ရိုးရိုး glitter အမှုန်လေးတွေကို Vaseline လို lotion တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ရောပြီးလိမ်းပေးပါ။ မနှစ်ကသင်္ကြန်မှာတော့ ဦးရေပြားပေါ်မှာ glitter တွေထည့်တာခေတ်စားသွားပေမယ့် ပိုပြီးဆန်းသွားအောင် glitter တွေကိုဆံပင်တွေမှာပါလိမ်းကြည့်ပါ။ …………………………………………………………………………………………………. ၂) Scarf လေးတွေရောပြီးချည်မယ်။ ဆံပင်လေးတွေထုံးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျစ်ဆံမြီးကျစ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ပုဝါလေးတွေထည့်ကျစ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီလိုထည့်မကျစ်ချင်ရင်တောင် ခေါင်းထိပ်မှာပုံစံမျိုးစုံလုပ်ပြီးလည်း ချည်လို့ရပါသေးတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၃) လွယ်လွယ်ကူကူ ကျစ်ဆံမြီး။ ဒီနည်းလေးကတော့ အချိန်လည်းသိပ်မကုန်၊ လွယ်လည်းအလွန်လွယ်တဲ့ကျစ်ဆံမြီးလေးပါ။ အရင်ဦးဆုံး ဆံပင်ကိုအလယ်ခွဲပြီး ထိပ်ကနေကျစ်ဆံမြီးလေးကျစ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အနေအထားလောက်ရောက်ပြီဆို သားရေပင်အမဲလေးတွေနဲ့ ခဏချည်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ messy bun သေးသေးလေးထုံးလိုက်ပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ ရိုးရှင်းလှပတဲ့ ဆံပင်ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုရပြီလေ။ …………………………………………………………………………………………………. ၄) အရောင်လေးတွေရောပြီးကျစ်မယ်။ ကိုယ်ကျစ်နေကျ ပုံမှန်ငါးရိုးကျစ်ဆံမြီးလေးမှာ အရောင်လေးတွေပါတဲ့ဆံပင်တုလေးတွေကို ထည့်ကျစ်ကြည့်ပါ။ အခုဆို ကလစ်နဲ့ညှပ်လို့ရတဲ့ အရောင်ပါတဲ့ဆံပင်တုလေးတွေကို သေးသေးကွေးကွေးလေးတွေ မဟုတ်ဘဲ အထုပ်လိုက်လည်းရောင်းနေကြပြီနော်။ အဲဒါလေးတွေဆို ကျစ်ရတာပိုကောင်းပြီး အရောင်လည်းစိတ်ကြိုက်စပ်လို့ရတာပေါ့။ …………………………………………………………………………………………………. ၅) ပန်းပွင့်လေးတွေထည့်ကျစ်ပါ။ Glitter တွေလိုအရမ်းမကလက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပန်းပွင့်လေးတွေကပ်တာကအသင့်တော်ဆုံးနဲ့အလှပဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့်သတိထားရမှာက ပန်းပွင့်လေးတွေကပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေဖြစ်နေပါစေ။ နောက်ပြီး ပြုတ်မကျအောင် ကလစ်အမဲလေးတွေနဲ့လည်း ထိုးပေးထားဦးနော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၆) Dreadlock ဒီဆံပင်ဒီဇိုင်းလေးကတော့ သင်္ကြန်မှာ တကယ်ကိုအပီကဲချင်တဲ့ သူလေးတွေအတွက်ပါ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက dreadlock ကျစ်ရင်တော့ တော်တော်ကြာကြာခံတဲ့အတွက် သင်္ကြန်ခဏမဟုတ်ဘဲ နောက်ပိုင်းအတွက်ပါထည့်စဉ်းစားထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ …………………………………………………………………………………………………. ၇) Hair wrap ဒါလေးကတော့ ခပ်ရိုးရိုးဖြစ်နေပေမယ့် တကယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါအရမ်းဂေါ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ သူက dreadlock လိုအကြာကြီးခံတဲ့အထဲတော့ မပါပါဘူး။ ကြိုးလေးတွေကိုအရောင်လေးတွေစပ်ပြီး ကျစ်လို့လည်းရသလို၊ တွဲလောင်း accessory လေးတွေပါထည့်ပြီးအလှဆင်လို့ပါ ရပါတယ်။ အရမ်းထင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 4/5 ချောင်းလောက်ကျစ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ကဲ … ဒီလိုဆိုရင် ဆံပင်ကျစ်နည်းအလန်းတွေနဲ့ ကားနဲ့လည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဏ္ဍပ်ထိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်္ကြန်မှာ အသားကုန်လန်းနေနိုင်ပြီပေါ့နော်!!! ...
သင်္ကြန်ပြီး နေလောင်နေတဲ့အသားအရေကို ဘယ်လိုပြန်ထိန်းသိမ်းရင်ကောင်းမလဲ??? 🤔🤔🤔 In:Beauty Hacks, Kawi Inspires
အခုဆို သင်္ကြန်လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကခြောက်သွေ့ပြီး ပျင်းစရာကောင်းနေပြီမလား??? 😢😢😢 ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလည်းစဉ်းစားမရ၊ အရမ်းလည်းပျင်းဖို့ကောင်းပြီး လွမ်းစရာလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ် ဟုတ်? ဒီလိုဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုမေ့နေပြီထင်တယ်!!! သေချာစဉ်းစားကြည့်၊ ဘာမေ့နေသလဲဆိုတာ?? 😏😏😏 အသားအရေပြန်ထိန်းသိမ်းဖို့လေ!!!!!!!!!!!!!!! သင်္ကြန်မှာ လည်ကောင်းကောင်းနဲ့လည်ပြီး၊ ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေတွေကိုပြန်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးရမယ်လေ။ ဝေယျာဝစ္စလည်းမများ၊ လွယ်လည်းလွယ်၊ တကယ်လည်းအကျိုးရှိတဲ့နည်းလေးတွေကို ကဝိတို့ဘက်က share ပေးမယ်ဆိုဘယ်လိုလဲ?? 😍😍😍 ၁) Aloe vera (ရှားစောင်းလက်ပတ်) သုံးပါ။ နေလောင်နေတဲ့အသားအရေကို ကုသဖို့အတွက်က aloe vera က အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုပါ။ 💯💯💯 Aloe vera gel တို့၊ aloe vera lotion တို့လို skincare တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အပြင်၊ တကယ့် aloe vera အစစ်ကိုလည်း လိမ်းလို့ရပါတယ်။ သူကအအေးဓာတ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် နေလောင်လို့ပူစပ်စပ်ဖြစ်နေတဲ့အသားအရေတွေကို အေးမြသွားစေမှာပါ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်အပင်အစစ်က ရှာရတာနည်းနည်းခက်တာကြောင့် City Mart တွေမှာဆို အလွယ်တကူ အဆင်သင့် ဝယ်သုံးလို့ရတဲ့ဘူးလေးတွေရှိတယ်နော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၂) ရေများများသောက်ပါ။ ရေများများသောက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအရလည်းကောင်းသလို၊ အသားအရေကိုလည်းကြည်လင်စေပါတယ်။ နေလောင်သွားတဲ့အသားအရေနေရာတွေက ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက် ရေများများပြန်သောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၃) နေလောင်ဒဏ်ကို ကုသနေတုန်း နေထပ်မလောင်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ကိုယ်ကနေလောင်ဒဏ်ကိုကုနေတုန်း၊ အပြင်သွားရင်လည်း skincare မလိမ်း ဘာမလိမ်းနဲ့သွားနေတုန်းပဲဆိုရင် သင့်ရဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုကတော့ အရာရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အိမ်မှာကုသတာလည်းကုသ၊ အပြင်တွေထွက်တဲ့အခါမှာလည်း အကျႌလက်ရှည်တွေဝတ်၊ skincare တွေလိမ်းပြီး သေချာဂရုစိုက်ပေါ့နော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၄) Coffee scrub Coffee scrub က အသားအရေအရောင်မညီမျှမှုကို ညှိပေးနိုင်တဲ့အတွက် နေလောင်မှုကို အကောင်းဆုံးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာအလွယ်ဆုံးစပ်လို့ရတဲ့ coffee scrub ကတော့ ပျားရည်နဲ့ ကော်ဖီကို အနှစ်လိုမျိုးရလာအောင်ရောပြီး လိမ်းပေးတာပါပဲ။ Scrub ဆိုတဲ့အတိုင်း ရေချိုးတဲ့အခါ မချိုးခင်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေအရင်လောင်းလိုက်ပြီး scrub နဲ့တိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပြောင်သွားအောင်ရေနဲ့ဆေးချပြီး ဆပ်ပြာတိုက်ပေးပါ။ ပြီးတဲ့အခါမှာ အသားအရေလေး ပိုပြီးချောမွေ့လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Coffee scrub ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဒါမှမဟုတ် ပျင်းတယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်သင့် ၀ယ်သုံးဖို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ City Mart မှာပဲ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၅) Cucumber scrub သခွားသီးကို အဖတ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အနေအထားအထိကြိတ်ပေးပါ။ အဲဒီအနေအထားက သင့်ရဲ့နေလောင်နေတဲ့အသားအရေကို ကုသပေးဖို့အတွက် နောက်ထပ်အသင့်တော်ဆုံးနည်းတစ်ခုပါ။ သခွားသီးက နေလောင်နေတဲ့အသားအရေတွေကို သူ့မှာရှိတဲ့ သဘာဝအအေးဓာတ်နဲ့ အကောင်းဆုံးကုသပေးမှာပါ။ ၆) Spa သွားပေးပါ။ Scrub လုပ်ဖို့ပျင်းနေရင် spa ကောင်းကောင်းတစ်ခုသွားလိုက်ပါ။ Spa မှာဆို package တွေမျိုးစုံလည်းရှိတာမလို့ အသားအရေအတွက်အကောင်းဆုံးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မယ့်ဟာကို ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက လုပ်ပေးမှာမလို့ ပိုပြီးလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းမှာပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ်လည်းမပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့။ 😜😜😜 ဒီလိုဆို သင်္ကြန်မှာနေပူပူ၊ ရေစိုစိုနဲ့ အသားကုန်ကဲထားတဲ့ ကောင်လေး၊ ကောင်မလေးတွေ သင်္ကြန်ပြီးလည်း အသားအရေလေးက လှလှပပနဲ့ အိုကေမှာစိုပြေပြီပေါ့!!! 😄😄😄 ...
နွေရာသီလို ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာတောင် natural glass glow အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း (၅) မျိုး။ In:Beauty Hacks, Kawi Inspires, Life Hacks
အသားအရေကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းဖို့က မိန်းကလေးတွေအတွက် မလုပ်မဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါ့အပြင် ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုလိုပူပြင်းလာတဲ့ နွေရာသီမှာ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ၁။ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ လက်နဲ့မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာသစ် brush နုနုလေးကို အသုံးပြုပြီး စက်ဝိုင်းပုံစံ ဖြည်းဖြည်းချင်း သစ်ပေးပါ။ ဘာလို့လက်မသုံးဘဲ brush ကိုသုံးခိုင်းလဲဆိုတော့ brush တွေက အသားကိုပိုချောစေနိုင်သလို ပိုပြီးသန့်စင်စေလို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ မျက်နှာမသစ်ခင်တိုင်း မိတ်ကပ်လေးတွေအရင် ပြောင်အောင်ဖျက်ပေးဖို့ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ပြီး မျက်နှာကနေ့တိုင်းသစ်ရတာဆိုတော့ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်လေးသိထားတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ……………………………………………………………………………………………….. ၂။ Exfoliate (ဂျီးပုံမှန်ချွတ်ပေးပါ) Exfoliate ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းက မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုလိုပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမျိုးမှာဆိို နေပူဒဏ်ကြောင့် ညိုညစ်သွားတဲ့ မျက်နှာတွေအတွက် ပိုပြီးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ Exfoliate လုပ်တဲ့အခါမှာဆို scrub လုပ်ပေးလို့လည်းရသလို၊ peeling သို့မဟုတ် mask လည်းကပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ အရေးကြီးတာက exfoliate လုပ်ပြီးတိုင်း toner နဲ့ moisturizer လေးတော့ပြန်လိမ်းပေးဖို့လိုတယ်နော်။ နောက်ပြီး exfoliate ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် တစ်လ သုံးခါထက်ပိုပြီး မလုပ်သင့်ပါဘူးဆိုတာကိုတော့ မှတ်ထားပေးပါနော်။ ……………………………………………………………………………………………….. ၃။ Sun-cream တစ်ခုတော့ မဖြစ်မနေ ပုံမှန်လိမ်းပေးပါ။ Sun-cream ဆိုတာ ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှ လိမ်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလို ပူပြင်းတဲ့ဒေသမျိုးမှာဆို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ UV ရောင်ခြည်တွေဆိုတာ နေခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေမှ ထိနိုင်တာမဟုတ်သလို သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရေပြဿနာတွေဆိုတာကလည်း အရမ်းပြင်းထန်တယ်လေ။ သူတို့တွေက နေရောင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့တွေက သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်ပဲသွားသွား ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ ……………………………………………………………………………………………….. ၄။ မျက်နှာကို ရေနွေးငွေ့နဲ့ တစ်ပတ်တစ်ခါ ပေါင်းတင်ပေးပါ။ အခုလိုပေါင်းတင်ပေးခြင်းက မျက်နှာပေါ်က ပိတ်နေတဲ့ ချွေးပေါက်လေးတွေကို ပွင့်စေပြီး မျက်နှာကို ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ပတ်လုံးအပြင်ထွက်ထားလို့ နေပူဒဏ်တွေကြောင့် မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို အထူးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ မကုသပေးဘဲ ဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူးဆိုပြီး ထားထားလိုက်ရင် ကြာလာတဲ့အခါမှာ တင်းတိပ်တွေ၊ မှဲ့ခြောက်တွေပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီကုထုံးလေးနဲ့ ကုသပေးဖို့တော့ လိုအပ်တယ်နော်။ နည်းလေးကတော့… ရေနွေးဆူဆူကို အဝကျယ်တဲ့ ဇလုံတစ်ခုမှာထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ခေါင်းပေါ်မှာ တဘက်အုပ်ပြီး ၂ မိနစ်ကနေ ၄ မိနစ်လောက်ထိ မျက်နှာကို ဇလုံဝနားကပ်ပြီး ရေနွေးငွေ့လေးနဲ့ ပေါင်းတင်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ လန်းဆန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ အသားအရေလေးကို ခံစားမိမှာပါ။ ……………………………………………………………………………………………….. ၅။ ညဘက်တိုင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုလည်း lip balm (နှုတ်ခမ်းအဆီ) လေးလိမ်းပြီးမှအိပ်ပါ။ မျက်နှာအသားအရေကိုပဲ ဂရုစိုက်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ… နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့လိုတာပေါ့။ မျက်နှာလေးကနုနုဖတ်ဖတ်လေးဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကျတော့ ခြောက်ပြီး နွမ်းနေရင်ဘယ်ပြည့်စုံပါ့မလဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့ ညအိပ်ခါနီးတိုင်း lip balm (နှုတ်ခမ်းအဆီ) လေးလိမ်းပြီးမှအိပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အခုလို matte (နှုတ်ခမ်းနီ အခြောက်) တွေဆိုးနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဆို အထူးလိုအပ်တာပေါ့။ ဒါမှ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေလည်း စိုစိုအိအိလေးဖြစ်နေမှာပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ၀ှက်ဖဲလေးတစ်ခုပြောပြပေးမယ််နော်။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ highlighter သုံးတာပါ။ နေ့စဉ်အတွက် မိတ်ကပ်တွေမလိမ်းရင်တောင် toner, moisturizer လေးလိမ်းပြီးတဲ့အခါ ပါးနှစ်ဖက်နဲ့ နှာခေါင်းထိပ်လေးကို highlight ပါးပါးလေးတင်ပေးရင် မမတို့လိုချင်တဲ့ perfect natural glow face လေးရပြီပေါ့။ နောက်တစ်ခုမှာချင်တာက မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း၊ exfoliate လုပ်ပြီးတိုင်း၊ မျက်နှာပေါင်းပြီးတိုင်း toner နဲ့ moisturizer လေးကိုပုံမှန်ပြန်သုံးပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ ဒီလိုလွယ်ကူရိုးရှင်းးတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ဆို natural glass glow အသားအရေလေးကို နေရာမရွေး အချိန်မရွေး အမြဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့!!! ...
ယောက်ျားလေးတွေအတွက် လွယ်ကူူရိုးရှင်းတဲ့ နွေရာသီ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း (၅) မျိုး In:Beauty Hacks, Kawi Inspires, Life Hacks
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာက မိန်းကလေးတွေတင် လိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေလည်း အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ ယောကျ်ားလေးအများစုက မနက်ပိုင်းအိပ်ရာနိုးရင်တော့ မလွှဲသာလို့မျက်နှာကို သစ်လိုက်ပေမယ့် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးဆို အပျင်းထူပြီး မျက်နှာမသစ်ဘဲအိပ်တတ်ကြတယ်လေ။ ပိုဆိုးတာက တစ်ခါတလေကျရင် မနက်မျက်နှာသစ်တာတောင် ဆပ်ပြာမသုံးတဲ့ရက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး အခုဆို နွေရာသီလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ အသားအရေကို ပိုပြီးဂရုစိုက်ဖို့လိုလာပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေမဟုတ်ဘဲ အပျင်းကြီးတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေအတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နွေရာသီ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း (၅) မျိုးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁) မျက်နှာကို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ပုံမှန်သစ်ပေးပါ။ အပျင်းမထူပါနဲ့။ တစ်ရက်ကို မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ်တော့ သင့်မျက်နှာကို ပုံမှန်လေးသစ်ပေးပါ။ နောက်ပြီး မျက်နှာသစ်ရင်လည်း မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာလေးသုံးပြီး သစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါမှ မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေ သန့်ရှင်းသွားမှာပေါ့။ မနက်ပိုင်းသစ်ပေးတာက မျက်နှာကိုလန်းဆန်းစေပြီး ညမအိပ်ခင်တစ်ခါ ထပ်သစ်ပေးတာက တစ်နေကုန်ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေပေပြီး ညိုညစ်နေတဲ့မျက်နှာလေးကို ပြန်လည်လန်းဆန်းဖြူဝင်းစေပါတယ်။ ၂) Wet Tissue သုံးပြီး အသားအရေခြောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။ အခုလို ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာဆို ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်နေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်လာပြီဆို အထူးသဖြင့် မျက်နှာနဲ့ အသားအရေတွေ ခြောက်လာတာကိုခံံစားရမှာပါ။ အဲ့လိုအဖြစ်မခံပါနဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသားအရေခြောက်တာလောက် ခံရခက်ပြီး ကြည့်ရဆိုးတာမရှိလို့ပါ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့… ပထမအချက်အနေနဲ့ ရေများများသောက်ပါ၊ နောက်ပြီး အသားအရေတွေခြောက်လာပြီဆိုရင်တော့ wet tissue လေးသုံးပြီး ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးပေါ့။ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ အသားအရေစိုပြေမှုကို လိိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ညမအိပ်ခင် Aloe Vera soothing gel လေးကို မျက်နှာသစ်ပြီး moisturizer အဖြစ်လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။ ၃) Sun-cream တစ်ခုသုံးဖြစ်အောင်သုံးပါ။ နေပူသည်ဖြစ်စေ၊ နေမပူသည်ဖြစ်စေ နွေရာသီဆိုအပြင်ထွက်တိုင်း sun-cream တစ်ခုခု လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ UV ရောင်ခြည်တွေဆိုတာ ကိုယ်တွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ သူတို့က နေပူမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး နေမပူရင်လည်း အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ကြောင့်ပဲ အသားအရေတွေမဲညစ် ပျက်စီးကြတာလေ။ ဒါကြောင့်မို့ အပြင်မထွက်ခင်တိုင်း sun-cream လေးလိမ်းပေးဖို့ မပျင်းပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ၄) Sun-cream မလိမ်းချင်ရင် ဦးထုပ်ဆောင်းပါ။ ၅) ဆီကြော်မုန့်တွေအစား အသီးများများစားပါ။ ဒါကတော့ စူပါပျင်းတဲ့ယောကျ်ားလေးတွေအတွက်ပါ။ ဘာလို့ sun-cream အစား ဦးထုပ်ဆောင်းခိုင်းလဲဆိုတော့ ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်းက အထူးသဖြင့် မျက်နှာနဲ့ ဆံပင်တွေကို အပူဒဏ်နဲ့ နေရောင်ခြည်တွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် အနည်းဆုံး sun-cream မလိမ်းရင်တောင် ဦးထုပ်လေးတော့ ဆောင်းသွားဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အသီးအနှံများများစားပေးခြင်းက အသားအရေကို စိုပြေစေပြီး ကြည်လင်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေက နေလောင်ဒဏ်မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ကအသားအရေကို သာမန်ထက်ပိုနူးညံ့ပြီး စိုစိုပြေပြေလေး ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ တစ်ပတ်နှစ်ခါလောက် exfoliate ဂျီးပုံမှန်ချွတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဂျီးချွတ်တဲ့အခါ scrub ဖြစ်ဖြစ်၊ peeling ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရသလို mask လေးပုံမှန်ကပ်ပေးရင်လည်း အသားအရေကို ပိုပြီးကောင်းစေပါတယ်။ အခုဆို နွေရာသီမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းလို့ရမယ့် နည်းလေးတွေသိသွားပြီဆိုတော့ လိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြဖို့ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ...
အဝတ်ဘီရိုထဲတွင်မရှိမဖြစ်ရှိထားသင့်သော အဝတ်အစား နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ In:Beauty Hacks, Kawi Inspires
မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အဝတ်ဘီရိုထဲမှာ မရှိမဖြစ်ရှိထားသင့်တဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါမှ အရေးကြုံလာတဲ့အခါ ကပျာကယာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ အဲဒါကြောင့် အောက်က ဇယားလေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အဝတ်ဘီရိုထဲမှာ အနည်းဆုံးတစ်ထည်လောက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အခုအပေါ်မှာဖော်ပြပေးထားတာတွေကတော့ အဓိကလိုအပ်ချက်တွေပေါ့။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ညစာစားပွဲတွေ၊ မင်္ဂလာပွဲတွေအတွက် ပွဲတက်ဝတ်စုံတစ်စုံလည်း ရှိသင့်ပါတယ်နော်။ ...
ဘယ်လိုအချိန်မျိုးတွေမှာ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို စွန့်ပစ်ရမလဲ??? In:Beauty Hacks, Kawi Inspires
မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေဆိုတာ ဖောက်ပြီးလေထိသွားတာနဲ့ မိတ်ကပ်အာနိသင်တွေ စတင်လျော့ကျလာပြီး ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းတွေပါ ကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ကို ကြာကြာသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ဇယားလေးဟာဆိုရင် မိိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Pati Dubroff က သုံးနေကျ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ခန့်မှန်းသက်တမ်းလေးတွေကို ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီဇယားလေးထဲမှာပြထားတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေးတွေကို ခြောက်သွေ့ပြီးအေးနေတဲ့ နေရောင်မထိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ စနစ်တကျသိမ်းမယ်ဆိိုရင် ခန့်မှန်းထားတဲ့သက်တမ်းတွေထက်ပိုပြီး ကြာကြာခံနိုင်ပါတယ်လို့လည်း သူမက ပြောပြထားပါသေးတယ်။ ပိုပြီးဂရုစိုက်သင့်တာကတော့ နှုတ်ခမ်းနီတွေ၊ အောက်ခံ foundation တွေ စတဲ့ခရင်မ်လိုပျစ်ပျစ်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က powder အမျိုးအစားတွေထက် ပိုပြီးမြန်မြန်ပျက်စီးလွယ်လို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်က တကယ်လို့ သင်သုံးနေတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေက အနံံ့တွေပါပြောင်းလာပြီဆိုရင် ဆက်မသုံးသင့်တော့ဘူးလို့လည်း သူမက အကြံပေးထားပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာက powder မှုန့်လေးတွေပါ။ သူတို့က တော်ရုံမပျက်စီးတတ်ဘူးဆိုပေမယ့် သူတို့ကိုသုံးပြီးသား တို့ဖတ်တွေ ဖော့တွေနဲ့အတူထားမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်မတန်ခင်ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တို့ဖတ််တွေ၊ ဖော့တွေက မျက်နှာပေါ်က အဆီဓာတ်တွေ အစိုဓာတ်တွေကို စုပ်ယူထားတော့ မှိုပေါက်နိုင်ခြေ ပိုများလို့ပါ။ အဲ့တော့ သူနဲ့အတူထားတဲ့ ပစ္စည်းကိုပါ ပျက်စီးစေနိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုခွဲပြီးထားပေးမယ်ဆိုရင် ဒီ powder မှုန့်တွေက ၃ နှစ်လောက်ထိတောင်ခံတယ်လို့သိရပါတယ်။ ...